Waa Maxay Sababta Looga Soo Horjeedo European Super League? Maxaa Loo Diidayaa Tartan Ku Kooban Kooxaha Waa Weyn? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWaa Maxay Sababta Looga Soo Horjeedo European Super League? Maxaa Loo Diidayaa Tartan Ku Kooban Kooxaha Waa Weyn?
April 20, 2021 admin Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Waxaa la soo gaaray waqtigii ay baqi jireen taageerayaasha kubada cagta tobanaankii sannadood ee ugu danbeysay. European Super League waxaa muddo dheer ku hanjabayay kooxaha ugu waa weyn qaarada Yurub kuwaasoo aaminaa inay u qalmaan lacag ka badan tan ay haatan helaan iyo inay iyaga go’aamiyaan mustaqbalka kubada cagta sababtoo ah iyaga ayaa ah kooxaha loogu daawasho badan yahay.
Mudadii sannadaha aheyd, UEFA Champions League waxaa loo bedbelay kooxaha waa weyn dartood, waxaa laga soo tagay qaabkii bug baxda ahaa ee European Cup ee ay kaliya ciyaari jireen kooxaha soo qaaday horyaalada Yurub, waxaana loo bedelay mid leh wareeg group sannadkii 1992 iyadoo haatan la qorsheynayay in 36 kooxood ay ka qeyb qaadanayaan tartanka wixii ka danbeeya 2024.
Isbedelaan oo dhan waxaa loo sameeyay in loo fududeeyo kooxaha waa weyn inay u soo baxaan UEFA Champions League oo ah tartanka lacagta ugu badan ay ka soo xarooto dhanka daawashada, waxaa sannad walba laga helaa balaayiin doolar. Laakiin intaas kuma aysan filnaanin kooxaha waa weyn oo waxay sii raadinayaan lacag iyo maamuus intaas ka sii weyn.
Lixda kooxood ee England ugu waa weyn – Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal iyo Tottenham Hotspur – oo lagu daray Juventus, AC Milan iyo Inter Milan oo Talyaaniga matalata iyo Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid oo Spain matalaya ayaa ah 12ka kooxood ee haatan shaaciyay inay dhisayaan horyaalka Super League. Seddex kooxood kale oo noqonaya aasasayaasha ayaa iyagana lagu soo dari doonaa halka xilli ciyaareed walba ay shan kooxood u soo bixi doonto iyadoo lagu qiimeynayo guulahooda horyaalka laakiin faahfaahin lagama bixinin sida ay ku soo baxayaan.
Tartanka wuxuu noqon doonaa mid 20 kooxood ka kooban wuxuuna bedeli doonaa UEFA Champions League iyo horyaalada ugu caansan Yurub.
Kooxaha ugu fiican iyo ciyaartoyda ugu fiican dunida oo iska horimaanaya, maxaa ku jaban?
Waxay u muuqataa fekrad aad u fiican in kooxaha ugu waa weyn ay isbuuc walba iska horyimaadaan laakiin waxaa xusid mudan in xamaasada kubada cagta Yurub ay ku dhisan tahay qaabka loo dejiyay horyaalada iyo tartamada Yurub.
Waa inaad u shaqeysato inaad u soo baxdo UEFA Champions League oo aad ku dhameysato kaalimaha ugu sareeya horyaalka wadankaaga, haddii xilli ciyaareed xun uu ku soo marana waxaa macquul ah inaad heerka labaad u dhacdo. Waana taas mida dhadhan macaan u yeesha guusha iyo guuldarada.
Tartanka cusub ee Super League taas ayuu meesha ka saarayaa, 15ka kooxood ee aasasayaasha noqonaya kama dhacayaan tartanka, uma baahna inay u soo baxaan oo booskooda waa u xaqiijisan yahay abid. Xitaa haddii koox ka mid ah ay soo iibsato ciyaartoy aan fiicneyn oo ay keensato tababare aan fiicneyn booskooda Super League wuu u xaqiijisan yahay. Haddii ay xitaa ku fashilmaan horyaalkooda booskooda tartanka ugu weyn Yurub waa u xaqiiqo.
Waxay taasi u sahleysaa kooxahaan inay helaan lacag aad u badan, taasoo ka dhigeysa inay abid iska noqdaan kooxo waa weyn oo aan loo soo dhawaan karin, waxayna taasi dileysaa fursad walba oo ay koox kale u heysatay inay iyadana heerkaas gaarto ah, sidii Leicester City ay sameysay 2015-16 oo kale.
Naqshada Super League waxaa laga soo minguuriyay isboortiga Mareykanka oo tartamada waa weyn aan laga dhicin loona soo dalicin. Laakiin kubada cagta waxa xiiso u yeela ayaa ah in xilli ciyaareedkii ay kooxaha u tartamaan waxyaabo badan oo kala gedisan oo ay shaqeysan karaan.
Tusaale waxaa Premier League xiiso u yeelaya in marka ugu horeysa loo tartamo kooxda qaadeysa horyaalka, ka dib afarta sarre ee u soo baxeysa Champions League. Waxaa sidoo kale loo tartamaa kooxaha u soo baxaya Europa League xitaa kooxaha ugu liita ayaa tartan xiiso leh dhexmaraa madaama ay ka cararayaan heerka labaad.
European Super League wuxuu dilayaa nidaamkaas.